ဝတ်လစ်စလစ်ဒီလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်အရောင်ကဘာလဲ? ဒီအရိပ်အဓိကအားဖြင့်သဘာဝနှင့်သဘာဝနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဤသည်အဓိကအားဖြင့်အဝါနုရောင်ရှိသောနှင့်အသားအရေတန်ချိန်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံအလေးပေးဘို့ဒီဇိုင်နာများအနည်းငယ်အညိုရောင်သို့မဟုတ်အရိပ်အနည်းငယ်ရောင်ဆင်ယင်ခြယ်ထည့်ပါ။ stylist ပို. ပို. ဟာအပြစ်ကင်းစင်, အချစ်ဇာတ်လမ်း, နူးညံ့ကြင်နာမှုနှင့်လျှပ်ရောင်ပြန်ဟပ်သောစတိုင်ပုံရိပ်တွေဝတ်လစ်စလစ်, ကိုဖန်တီးရန်ဖက်ရှင်အမျိုးသမီးကမ်းလှမ်းနေကြသည်။ အရောင်ဝတ်လစ်စလစ် ပို. ပို. မင်္ဂလာဆောင်ပုံများ, တွင်အသုံးပြုလျက်ရှိသည် တစ်ဦးချင်းစီနေ့၌လေး က output မှအဖြစ်အဝတ်။
ဝတ်လစ်စလစ်ရောင်စုံဖိနပ် - ဆိုဖိနပ်ဗီရိုမှဖြစ်ကောင်းအများဆုံးအဆင်ပြေဖြေရှင်းချက်။ သဘာဝအရိပ်၏ဖိနပ်မဆိုစတိုင်အဘို့, အဓိကအာရုံစိုက်ယူမထားဘူး, အဖြစ်ဂန္အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်အဆင်းအရောင်မတူဘဲ၌စုံလငျဖွစျပါသညျဆန့်ကျင်ဘက်ကထပ်ပြောသည်။ ဝတ်လစ်စလစ်ရောင်စုံဖိနပ်ကိုသင်ရွေးချယ်ထားသော ensemble မှသင့်လျော်သောနီးပါးမည်သည့်ပုံစံမျိုး, သုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုပါ။ ဒီဖိနပ်ဆောင်ပုဒ်ခါးပန်းကိုများအတွက်မရှိမဖြစ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ တိုတောင်းသောခုနှစ်တွင်ယနေ့ဝတ်လစ်စလစ်အရောင်ဖိနပ်ထူးခြားအောင်မြင်စွာအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်၏ပုံစံအတွက်ဂန္အစားထိုး။
စားဆင်ယင် - အရောင်ဝတ်လစ်စလစ်အဆက်မပြတ်တောက်ပစတိုင်နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ဘယ်မှာအဝတ်အစား၏တူညီသောအပိုင်းအစ။ တလက်စားဆင်ယင်ဝတ်လစ်စလစ်အရောင်ပြပွဲတွင်အမှတ်ရစရာသဘာဝအပုံများ, ဒါပေမယ့်အခြားအပေါ် - သင်အမြဲထွက်မတ်တပ်ရပ်ချင်တယ်။ ယနေ့ပေမယ့်ဒါဟာသဘာဝကမှခွဲဝေသောအခါအခြေအနေများရှိနေပါသည်။ တစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှာဆန့်ကျင်မဖက်ရှင်အတွက်ဆန့်ကျင်ဘက်ဦးတည်ချက်ရန်, stylist အောင်မြင်စွာသူတို့ကိုပေါင်းစပ်။ လှလှပပတောက်တောက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်အဆင်တန်ဆာတွေနဲ့ပြည့်စုံသည့်သဘာဝအရောင်များကိုဆငျ။ ရှည်လျားသောဝတ်လစ်စလစ်အရောင်စားဆင်ယင်တွင်သင်သည်အလွယ်တကူအဆင်းလှသောဝဲခါးသို့မဟုတ်ရင်ဘတ်ကိုချုံ့စေနိုင်သည်။ တိုတိုမှာစားဆင်ယင်မှအရောင်များကိုဝတ်လစ်စလစ်နဲ့တောက်ပဖြည့်စွက်၏ပေါင်းစပ်သင်ကျွမ်းကျင်စွာအားနည်းချက်တွေကိုဖုံးကွယ်နှင့်တန်ရာကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
တစ်ဦး swimsuit ဝတ်ဆင်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
လမ်းဖက်ရှင် - Fall 2015
တူနီးရှား - ဆွဲဆောင်မှုများ
အဆိုပါ Kardashian နှင့်အတူ Up ကို Keeping, Jenner ကော့စတာရီ၌သင်တို့၏အားလပ်ရက်ကနေပထမဦးဆုံးရုပ်ပုံများကိုထုတ်ဝေ
ကလေးများအတွက်ဂျိုက်သိုး - ရောဂါလက္ခဏာ
ထောပတ်မှို - ချက်ပြုတ်နည်းများ
Kim Kardashian ကအခမဲ့သူမ၏သား၏ပထမဦးဆုံးဓာတ်ပုံကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်